Nkeji 30 Nke abalị - Ezi Ntụziaka
ole beef maka tacos maka 30
kedu ihe kacha mma kacha mma chili
Nkeji 30 Nke abalị
Yabụ n'ụzọ dị mfe ịme ma na-atọ ụtọ nke ukwuu, nri abalị nri iri atọ a bụ mgbakwunye zuru oke na nri ọ bụla!
ahụekere bọta butter chocolate osikapa krispie emeso uzommeputa
N’ezie enweghi isi n’udi di uto dika achicha na-ekpo oku ma o bu nke na-esite na oven! M na-echeta na-abịa n'ụlọ akwụkwọ na isi nke freshly butere buns ma ọ bụ achịcha, njikere na-eche dị ka ndị zuru okè mgbe nri ụlọ akwụkwọ! Ruo taa, mgbe m na-anụ isi mmiri ọhụrụ, a na-ebugharị m ozugbo na oge obi ụtọ ahụ na ebe m bụ nwata.
Gaa ọsọ ọsọ rue taa na usoro ọrụ ọrụ siri ike, na-agba ọsọ na mmemme ụmụaka ma na-anwa ịme ndụ, ọ na-esiri ike iwekọ nri - hapụ naanị tinye na mgbakwunye!
Nke a bụ nri abalị nri abalị iri atọ dị ịtụnanya n'ihi na ọ dị mfe ịkwadebe, buns na-ewe obere oge iji bulie ma nsonaazụ ya bụ ọgwụgwọ na-atọ ụtọ nke na ọ bara uru itinyekwu mgbalị! Kedu nnukwu akụkụ iji nwee ọ bowlụ na nnukwu ite dị ụtọ ofe ma ọ bụ chili !
M hụrụ n'anya mma nke ịzụ nri abalị na-apụta site na ụlọ ahịa na àgwà dị mma nke ukwuu. N'ihe ka n'ọtụtụ ọnọdụ, ihe ndị a zụtara n'ụlọ ahịa nwere ihe mgbakwunye ma ọ bụ ihe nchekwa iji mee ka ndụ dị ogologo. Me nri abalị a na-eme n'ụlọ na-achọpụta na ọ nweghị ihe agbakwunye ma e wezụga ịdị mma dị mma! Na obere obere obere buns ndị a anaghị adịte aka ma ha ga-echegbu onwe ha gbasara ndụ!
Y’oburu n’inwe obi uto inweta nke fọduru n’echi ya, ha na-adi ndu ohuru ma buru ezigbo uzo jiri butter na jam jee ozi n’ututu! Enwere m mmasị ịnụ ụtọ ọpụrụiche a na kọfị ụtụtụ m - ọ bụ nri nkasi obi ọ kachasị mma!
Sensesì anyị bụ otu n'ime nsogbu kachasị emetụta echiche anyị niile ma na-emetụta ọnọdụ anyị. Ọ bụghị obere ihe ijuanya na mgbe anyị na-anụ isi nri nri abalị, ọ na-eme ka anyị nwee obi ụtọ na ọ excitedụ na atụmanya nke ọgwụgwọ ndị a dị ụtọ!
ọkụkọ casserole na nri na akwụkwọ nri
4,83site naOgbe 595votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge nri10 Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ18 na-apụta Onye edemedeHolly NilssonN’ezie enweghi isi n’udi di uto dika achicha na-ekpo oku ma o bu nke na-esite na oven! Nri nri abalị 30 a bụ nri zuru oke na nri ọ bụla! Bipute Ntụtụ
▢1 iko mmiri ọkụ mmiri ọkụ
▢⅓ iko mmanụ
▢¼ iko shuga
▢abụọ tablespoons yist
▢1 akwa kụrụ ihe
▢1 ngaji gbajiri butter
▢3 ka 4 iko ntụ ọka niile M na-eji nso 3
▢⅛ iko mmiri ara ime ụlọ okpomọkụ
Kpochapu oven na 400 * F.
N'ime nnukwu efere, jikọta 1 iko mmiri, mmanụ, shuga, na yist. Ka anyị nọdụ ruo mgbe yist afụ ọnụ (ihe dị ka nkeji 8). Ebido na amia egg ịrọ arọ butter na nnu.
Jiri igwekota guzoro ma ọ bụ jiri aka, tinye ntụ ọka, otu iko n'otu oge ruo mgbe ị ga-enwe ntụ ọka dị nro nke na-adịghị arapara n'ahụ. Igwakorita aka 10 nkeji ma ọ bụ 5 nkeji na a nkwụnye igwekota.
Kewaa mgwakota agwa n'ime 18 obuna iberibe, ma ghọọ bọọlụ. Tinye na pan tee mmanụ ma kpuchie ya na akwụkwọ akpụkpọ anụ na akwa nhicha.
Ka ebili 10 nkeji na a na-ekpo ọkụ n'ebe. (I nwere ike ikwe ka ha bilie gaa na nkeji iri atọ ma ọ bụrụ na oge kwere).
Mee ka mmiri ara ehi na mmiri ara ehi ma mee ya n'elu akwa n'etiti 10-12 nkeji ma obu ruo mgbe aja aja.
Mara: Ọ bụrụ na ị na-esi na pan 9x13, m na-eme mpịakọta 15. Ọ bụrụ na ị na-esi na pan 10x15, m na-eme mpịakọta 18.
Calorisị:Ogbe 134,Carbohydrates:19g,Protein:3g,Abụba:5g,Abụba Ajuju:1g,Cholesterol:iri na otumg,Sodium:76mg,Potassium:32mg,Eriri:1g,Sugar:3g,Vitamin A:36IU,Calcium:7mg,Iron:1mg
Isiokwunri abalị na-apụta N'ezieSide efere Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Ma ọ bụ oge pụrụ iche ma ọ bụ naanị ịchọrọ ihe mgbakwunye na-atọ ụtọ na nri izu ụka gị, 30-Minner Dinner Rolls zuru oke! Kpamkpam siri, ụtọ ma dị mfe iji mee, ị ga-achọ ime ha mgbe mgbe. Ndi ezinulo gi gakwa juo ase!
Achịcha Cheizy Garlic
dochie ọkụkọ efere maka beef efere